Ungayenza Kanjani i-Photoshop Camera Photos 3D - LucidPix
Ungayenza Kanjani i-Photoshop Camera Photos 3D
U-Adobe ukhiphe a uhlelo lokusebenza olusha lokuhlela isithombe lokho kulungele abantu abafuna ukuzama ngobuhlakani ngezithombe zabo! Ikhamera ye-Adobe Photoshop yinhle ngokuthola izithombe zakho I-LucidPix isilungele; Sebenzisa uhlelo lokusebenza ukukhulisa izithombe zakho ngokungeza okokuhlunga ngaphambi kokukungenisa ku-LucidPix ukuze uzenze zibe yi-3D. Kulesi sikhala sebhulogi, sikunikeza imiyalo yezinyathelo ngezinyathelo kule Khamera ye-Photoshop ukuthi kufanele wenze kanjani.
Isinyathelo 1: Vula i-Adobe Photoshop Camera
Uma usuvule uhlelo lokusebenza, ungathatha isithombe "bukhoma" ngokukhetha umbuthano omhlophe noma ukhethe isithonjana sohlaka lwesithombe ngakwesokudla kombuthano. Kulesi sibonelo, sikhethe isithonjana sohlaka lwezithombe ukukhetha isithombe kusuka kumugqa wekhamera ukuze usihlele. (Ithiphu: sithole isithombe sethu kusuka @visualgraphs Ikhasi le-Instagram!)
Isinyathelo 2: Ngenisa isithombe sakho esikhethiwe
Uma usukhethile isithombe ofisa ukusihlela, kuzovela esikrinini sakho lapho uhlelo lokusebenza luzothuthukisa khona isithombe sakho! Awudingi ngisho nokuphakamisa umunwe, njengoba uhlelo lokusebenza lonyusa ukugcwala, umehluko, incazelo nokuningi. Ngemuva kwalokhu, abasebenzisi bangakhetha ukusigcina isithombe ngemuva kokuthi uhlelo lokusebenza lusihlelile (isithonjana esingezansi kwesokudla) noma bakhethe ama- “lens” (isithonjana esingaphansi kwesobunxele) ukuze badlale bezungeza nezihlungi.
Isinyathelo 3: Faka izihlungi kusithombe sakho
Ngemuva kokukhetha isithonjana se- "Lenses", ukuhlunga okuhlukahlukene kuzovela ezansi kwesikrini. Skrolela kulezi bese uzisebenzisa esithombeni sakho ukuze ubone ukuthi yiluphi olusebenza kangcono! Ngalesi sibonelo, sikhethe isihlungi esithi "i-Celestial", ungasibona sisetshenziswa esithombeni sethu esingezansi. Lapho uswanelisekile ngesithombe sakho esihleliwe, khetha umcibisholo okhomba phansi ukubuyela ekhasini elingehla lapho ungagcina khona isithombe sakho.
Isinyathelo 4: Vula i-LucidPix
Khetha isithonjana sekhamera ezansi kwesikrini ukungenisa isithombe sakho esihleliwe kusuka Ikhamera ye-Adobe Photoshop okulondoloze kwikholi yakho yekhamera. Ngokuthepha isithonjana sekhamera ku-LucidPix, kuvela ikhamera yakho futhi ungakhetha isithombe sakho esihleliwe.
Isinyathelo 5: Guqula isithombe sakho sibe yi-3D!
Khetha isithonjana se- “Khiqiza i-3D” ekubeni inqubo yokuguqulwa kwe-3D. Uma usukhethiwe, linda imizuzwana embalwa ukuze umlingo weLucidPix usebenze. Okulandelayo, skrolela ngakwesokudla ukukhetha indlela oyikhethile yokuthumela. Ngalesi sibonelo, sikhethe ukuthumela isithombe ngokuthi "Ividiyo ye-3D". Uma lokhu sekukhethiwe, ungakhetha ukwakheka kwevidiyo yakho ye-3D! Khetha kusuka ku-Orbit, Zoom, Slide, and Square. Ekugcineni, khetha u- “Gcina ividiyo” uma usuqedile.
Isinyathelo 6: Jabulela isithombe sakho esisha se-Adobe Photoshop Camera & LucidPix 3D!
Uzame le ndlela yokuqondisa ekuguquleni isithombe sakho se-Adobe Photoshop Camera ibe yi-3D? Sitshele ukuthola ithuba lokufakwa obala Instagram wethu!
Izeluleko ezi-5 Zokuhlala Usebenza Njengoba Usebenza Ekhaya →← Namanje Impilo Photography ku-3D